Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: စစ်တွေ နည်းပညာ ကောလိပ် ကျောင်းသားများ တိုက်ခိုက်ခံရ
စစ်တွေ နည်းပညာ ကောလိပ် ကျောင်းသားများ တိုက်ခိုက်ခံရ
ယမန်နေ့က ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော စစ်တွေ နည်းပညာ ကောလိပ်မှ ကျောင်းသားများကို ယနေ့ ကျောင်းဆင်းချိန်တွင် မွတ်ဆလင် လူအုပ် တစ်ခုက တိုက်ခိုက်ခဲ့ သည်ဟု သိရသည်။
“ ဖြစ်တာက နေ့လည် ၁ နာရီကျော် ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျောင်းကားတွေကို ဘင်္ဂလီတွေက ဆွဲလား ရမ်းလား လုပ်တယ်လို့ ဒီလိုဘဲ ကျွန်တော် တို့ သတင်းရပါတယ်” ရခိုင်ပြည်နယ် ပြန်ကြားရေး အရာရှိ ဦးဝင်းမြိုင်က ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရင်းကို မေးကြည့်ရာ သူက ယခုလို ဆက်ပြောသည်။
“ သူတို့က ကျောင်းကားတွေကို တိုက်ခိုက်တာတွေ လုပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားတွေက ကျောင်းသားတွေ အတွက် စီစဉ်ပေးထားတာ။ အရပ်သားတွေ အတွက် မဟုတ်ဘူး။ ကျောင်းကားတွေကို တိုက်ခိုက်ရာကနေ ပြဿနာ ဖြစ်ကြတာပါ။ နောက်ပိုင်း လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ရောက်လာတော့ ပြဿနာက ပီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းမြိုင်က ပြောသည်။
ယခု တိုက်ခိုက်သည့် ဘင်္ဂလီရွာသားများမှာ ရေချမ်းပြင် အနီးရှိ ရွာကြီး၊ ရွာငယ်မှ ဖြစ်ပြီး တစ်ချို့မှာ ၎င်းရွာများ အနီးရှိ ကုတင်ပိုက်ရွာက ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နည်းပညာကောလိပ်မှ ကျောင်းသားတစ်ဦးကလည်း သူတို့ ယနေ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အခြေအနေကို ယခုလို ပြောသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ နည်းပညာကောလိပ် အနီးက အပြင်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ ဘင်္ဂလီ ရွာသားတွေက တုတ်တွေ၊ ဓါးတွေကို ထမ်းပြီး အုပ်စုလိုက် ပြေးလိုက်လာကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကျောင်းဆင်းချိန်ဆိုတော့ ကျောင်းပြင် လမ်းပေါ်ကနေ ကျောင်းထဲကို ပြန်ဝင် ပြေးကြတော့ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်ကုန်ပြီး ကျောင်းသူတွေ ငိုယိုပြီး အကူအညီ တောင်းကြတော့ အခြေအနေက ရုတ်ရုတ်သည်းသည်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြားတာက ဘင်္ဂလီတွေနဲ့ ဂျီအီး တပ်က လူတွေ ရှေ့မှာ ပြဿနာ တက်နေကြတယ်လို့ဘဲ ကြားပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အခင်း ဖြစ်ပွားစဉ် သုံးဘီး ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင် ပါလာသူ ဆရာမ တယောက်က သူမြင်တွေ့ ခံစားရပုံကို ယခုလို ပြောသည်။
“-အခုဆိုရင် ကျွန်မတို့ လုံခြုံမှု လုံးဝမရှိတောပါ။ ကျွန်မတို့ကို ဆိုင်ကယ်ကို တုတ်တွေ ဓါးတွေနဲ့ ဘင်္ဂလီတွေက လာတိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့က အသက်လု ပြေးကြရပါတယ်။ ဆိုင်ကယ် တက်စီ ဒရိုင်ဘာမှာ ဒဏ်ရာ ရရှိသွားပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ကျောင်းကို ဆက်မသွားနိုင်တော့ပါ။ အလုပ်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တောင် အလုပ်ပြုတ်ခံတော့မှာပါ” ဟု ပြောသည်။
ဦးဝင်းမြိုင်မှ စစ်သားများနှင့် စတင် ပြဿနာ ဖြစ်ပွားခြင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆိုသလို ဒဏ်ရ ရသူလည်း မရှိပါကြောင်း ပြောသည်။
လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း ဦးဝင်းမြိုင်က ယခုလို ပြောသည်။
“ လုံခြုံရေးကတော့ ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ရှိပါတယ်။ လမ်းတွေမှာတော့ မရှိဘူး။ ဒါကြောင်း မနက်ဖြန်က စပြီး လမ်းတွေမှာလည်း လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်သွားပါမယ်” ဟု ပြောသည်။
ယနေ့ ကျောင်းကားများကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် မွတ်ဆလင် ရွာသား ၃၀၀ ခန့်ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: စစ်တွေ နည်းပညာ ကောလိပ် ကျောင်းသားများ တိုက်ခိုက်ခံရ . All Rights Reserved